वार्डरब माल्फङ्सनमा पूजा
चल्तीकी नायिका पूजा शर्माको २७ औं जन्मदिन मनाउन उनको घरमा मंगलबार शुभेच्छुकहरु आइनैरहे । सञ्चारकर्मी पनि पुगे केकै बोकेर । एक युट्युबका लागि अन्तर्वार्ता दिँदा जोगिँदा–जोगिँदै यी नायिका जन्मदिनकै दिन वार्डरब माल्फङ्सनमा फँसिन् ।
एनआरएन, त्यसमा पनि सगरमाथा चढेका, तेस्रो रेखा थापाको साथ पाएका । कुनै समय सुर्दशन गौतमको शान नै छुट्टै थियो । उनको पछि लाग्नेहरुको कमी थिएन । अहिले पनि उनको पछि लाग्नेको कमी छैन । पहिले उनका प्रशंसक पछि लागेका थिए भने अहिले एक सय ९२ देशका प्रहरी
हनिमुन कहाँ जाने भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा लजाउँदै यो जोडीले ‘खै !’ भन्ने उत्तर दिन्थे । युरोपका तस्बिरले हनिमुन कहिले र कहाँ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिइरहेको छ ।
पलले दिएको तनाव
सुन्धारस्थित सिटिसी मलमा ‘वीर विक्रम २’ फिल्मको ट्रेलर रिलिजको कार्यक्रम थियो । नाजीर हुसेन, बुद्धि तामाङ र अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटी समयमा नै हलमा पुगे तर पल शाहको अत्तोपत्तो थिएन ।
वेन्डी विलियम्सले सोमबार बिहानको कार्यक्रम आफ्नै लागि डेडिकेट गरिन् । उनले ‘देयर बिजनेस इज आवर बिजनेस’ शीर्षकमा कार्यक्रम शुरु गरिन् र केविन हन्टरसँग भएको सम्बन्ध विच्छेदबारे खुलेर बोलिन् ।
बलिउड नायक विक्की कौशलसँग ब्रेकअपपछि हर्लिन सेठी डिप्रेसनमा पुगेको समाचार बाहिरिएको छ । ‘उरी–द सर्जिकल स्ट्राइक’को सफलतासँगै कौशलले सेठीसँगको सम्बन्ध तोडेको बताइन्छ ।
नायकको ‘लाखे’ हल्ला
प्रियंकालाइ इन्स्टाको सहारा
फिल्म चलोस् नचलोस् प्रियंका कार्कीलाई त्यत्ति मतलब देखिन्न । तीन फिल्म रिलिज भए तर अभिनयको हिसाबले उनलाई कुनै क्रेडिट आएन । तर बाल मतलब उनलाई ! कारण, उनले अभिनय गरेका फिल्मलाई दर्शकले नरुचाए पनि उनलाई रुचाएकै छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनी हिटै छिन्, विज्ञापनको बजारमा एकछत्र राज चलेकै छ ।
झरनाको ‘ज्वाइँ’ रहर
फिल्म ‘ए मेरो हजुर ३’ की निर्देशक झरना थापाले अभिनेता अनमोल केसीलाई ज्वाइँ भनेर जात्रा देखाइन् ।
मेगा स्टार मानिएका अभिनेताको फिल्मले समेत दर्शकलाई हलसम्म तान्न नसकेपछि अहिले फिल्म निर्माताहरु चिन्तामा छन् । एक्लै रिलिज हुने फिल्मले समेत लगानी उठाउन सकिरहेको छैन । यस्तो बेलामा चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष निर्माता केशव भट्टराई आफ्नै फिल्म जुधाउँदै छन् ।
शास्त्रले नै भन्छ १८ वर्ष पार गरेको सन्तान साथी समान हो । यो भनाइबाट नायक भुवन केसी ज्यादै नै प्रभावित रहेछन् । त्यसैको प्रमाण हो, उनले छोरा तथा नायक अनमोल केसीको जन्मदिनमा हालै सार्वजनिक गरेको तस्बिर जसमा उनी हातमा स्याम्पेनको ग्लास लिएर छोरासँगै बसेका छन् । छोरा अनमोल मुस्कुराइरहेका छन् ।
शर्मा क्याम्पमा साम्राज्ञी
चलचित्र निर्माता अशोक शर्माले लामो समयको निष्क्रियता तोड्न बनाएको ‘जय भोले’मा नायिकाको अफर गरेका थिए, साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई । तर पुराना खारिएका निर्माता तथा निर्देशक शर्मालाई नयाँ कलाकार शाहले पत्याइनन् र शर्मा अर्कै नायिकाको भर परे ।
कुन समय शुभ हो कुन अशुभ भन्दै नाम र दाम दुवै कमाएका ज्योतिष हरिहर अधिकारीले आफ्नै फिल्मको शुभअशुभ भने पत्तो लगाउन सकेनन् । टेलिभिजनमा ज्योतिषसम्बन्धी कार्यक्रम चलाएर भाग्य फल भनिदिने गरेका उनै हरिहरकै फिल्म ‘शुभ लभ’को शुभसाइत मिल्न सकेन ।
‘डोमिनेट्रिक्स’ अवतारमा पारमिता र करिश्मा
नायिका करिश्मा श्रेष्ठ ब्ल्याक आउटफिट, हातमा हत्कडी अनि चाबुक बोकेको अवतारमा देखिइन् । इन्टाग्राममा राखिएको यस किसिमको तस्बिरलाई ‘डोमिनेट्रिस’ अवतार भनिन्छ । अर्बन डिक्सनरीका अनुसार, डोमिनेट्रिक्सको अर्थ आफ्नो सेक्स पार्टनरलाई पीडा दिँदै नियन्त्रणमा राख्ने युवती हो ।
फिल्म चले चलोस्, नचले नचलोस् आफू भने चल्नै पर्छ है ! पोशाकले होस् या प्रेम जीवनले ।